Dutchtown, St. Louis, MO • Dhamaan Waxyaabaha Ku Saabsan Xaafada Dutchtown • DutchtownSTL.org
Ku saabsan Dutchtown
Dutchtown waa xaafad ku taal dhinaca Koonfureed ee St. Louis, Missouri. Xaafadda Dutchtown waa tan ugu dadka badan iyo juquraafi ahaan mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka jira magaalada 79 xaafadood. Dutchtown waxay hoy u tahay dadyow kala duwan, qaab dhismeed taariikhi ah oo kala duwan, jardiinooyin fara badan oo magaalada ah, iyo dhammaan noocyada kala duwan ee dukaamada, maqaayadaha, iyo ganacsiyada kale.
Soohdimaha waxa guud ahaan loogu yeero "Dutchtown" waa kuwo aad u madow. Magaalada St. Louis qeexayaa qaar ka mid ah xuduudaha gaarka ah. Laakiin calaamadaha agagaarka xaafadda ayaa kuu sheegi doona "Waxaad Ku Sugantahay Dutchtown" marka aad, dhab ahaan, ku sugan tahay Gravois Park, Mount Pleasant, ama Marine Villa. Halkan at DutchtownSTL, waxaan ku qiyaaseynaa Dutchtown inay ahaadaan wax kasta oo udhaxeeya Cherokee Street ama Chippewa Street waqooyiga, Bates Street ilaa koonfurta, Wabiga Mississippi ee bariga, iyo wadada tareenka ee Missouri Pacific ee dhanka galbeed.
Magaca "Dutchtown" wuxuu ku saleysan yahay qaldan loo yaqaan "St. Louis" oo ah "Deutsch," soogalootiga Jarmalka ah ee ku soo xoomay kuna dhisay dhismahan ballaaran ee koonfur-bari St. Louis laga bilaabo qeybtii labaad ee qarnigii sagaal iyo tobnaad. Magaca Dutchtown ayaa soo jiitamay tobanaankii sano ee la soo dhaafay, laakiin dad badan ayaa wali ugu yeera "Koonfurta Dhinaceeda."
Wadooyinka Ganacsiga ee Dutchtown iyo Jiidashada Main
In 2020, Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown iskaashi la sameeyay Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri waayo, Hal-abuurka St. Louis Main Streets si loo xoojiyo fayoobaanta dhaqaale, bulsho, dhaqan, iyo bay'ad ee Downtown Dutchtown iyo waddooyinka ganacsiga ee ku xeeran.
Bartamaha Magaalada Dutchtown: Meramec Street
Wadada Meramec ee bariga Grand Boulevard waxaa loo yaqaan "Downtown Dutchtown." Dharka ganacsiga xaafadda waxaa ku yaal makhaayado iyo baarar, dukaamo iib ah, iyo adeegyo kale.
Meramec iyo Virginia waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah barroosinka xaafadda ugu xooggan: Winkelmann Wiilasha Daroogada wuxuu ku sugnaa koonaha koonfur-galbeed ilaa 1913. Magaaladu Cunto Kafeega waxay siisaa cunno, cabitaan, iyo boos dhamaan noocyada shirarka bulshada iyo shirkadaha. Iyo Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta iyo xasilinta xaafadda iyo awood siinta bulshada ku hareeraysan.
Dhismaha taariikhiga ah ee Iiddii Fox wuxuu u adeegaa astaanta galbeedka ee Meramec. Dhamaadka bari waa St. Anthony ee Kaniisadda Katooliga ee Padua, Oo dhaadheer mataano dhaadheer oo dhaadheer laga arki karo dhammaan dhinacyada Koonfurta.
Jidadka waaweyn ee jidadka Dutchtown.
Koonfurta Grand Boulevard
South Grand Boulevard waxaa ku yaal ganacsiyo badan oo loogu talagalay soogalootiga kala duwan ee ugu yeera guriga Dutchtown. Makhaayadaha Fiyatnaamiis, kuwa wax iibsada, iyo maqaayadaha qaxwaha ayaa degta dhul ballaaran oo Grand ah, oo ay la socdaan Gurung Bazaar iyo dukaamo kale oo u adeega bulshada soogalootiga ah ee reer Nepali, Kaniisado yar yar, makhaayado, iyo dukaamo iyo xafiisyo kale ayaa buuxiya inta kale ee South Grand ee ku taal Dutchtown.
Marka lagu daro safafka sii kordhaya ee dukaamada loogu adeego bulshada isbaddelaysa weligood waa ganacsiyo ugu yeeray guriga Dutchtown muddo tobanaan sano ah: Nacnacyada Merb, oo caan ku ah Tufaaxa 'Bionic Apples' iyo 'strawberries' shukulaatada daboolan; Makhaayada Fox Feasting Feasting, oo sugeysa jiil cusub oo lahaansho ah; iyo dabcan Ted Drewes Qaboojiyay Custard - goobta waayeelka ah laakiin aan la aqoon, oo leh xariiqyo gaagaaban iyo baarkin dhigid ka fudud goobta mashquulka badan ee St. Louis Hills. Dugsiga Sare ee Katooliga Katooliga ee St. iyo xaruntooda 27 hektar waxay qabataa dhamaadka koonfureed ee Grand ee Delor Street.
Recently Hoyga loogu talagalay Aadanaha St. Louis dayactirey dhisme dheer oo 50,000 cag laba jibaaran ah oo ku yaal South Grand iyo Chippewa Street si ay ugu adeegaan xarumahooda, bakhaarkooda, iyo Hoyga loogu talagalay Soo Celinta Aadanaha, Guri bixiya qalab iyo qalab dhisme oo cusub oo dib loo isticmaali karo. Dhanka woqooyi, Garcia Properties ayaa dhawaan iibsatay Dhismaha Arcade Grandview ee ku taal Gravois Park dib u habeyn kadib tobanaan sano oo banaan.
Wadada Chippewa Street, oo ah xuduuda rasmiga ah ee udhaxeysa Gravois Park iyo Dutchtown right, ayaa waxaa lasoo darsay maalgashi sanadihii lasoo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, Horumarinta Bulshada iyo Kooxda Horumarinta Lutheran$ 12 milyan Mashruuca Chippewa Park ayaa wax ka qabanaya arrimaha banaan iyo guryaha ee tayada leh aagga iyagoo dib u horumarinaya shan iyo toban dhisme oo ku yaal ama u dhow Chippewa. Dhawaan la qaatay Qorshaha Xaafadaha Gravois-Jefferson waxay gogol dhig u tahay qorshaynta horumarka mustaqbalka, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo waddada Chippewa Street oo si hoose loo qadariyo.
South Broadway / Koonfurta Jefferson
Noocyo ganacsi oo ballaaran ayaa ku saleysan South Broadway iyo South Jefferson, oo ku milmay Chippewa Street. Qalabka Liberty, Qaxwada Sump, Iyo Suuqa Hilibka Don waa qaar ka mid ah meheradaha yaryar ee ku teedsan aagga. Golaha Daabacaadda ee Concordia wuxuu ku sugnaa aagga in ka badan 150 sano, sidoo kale Isbitaalka St. Alexius, Iyo Bulshada Dhaqanka Jarmalka sidoo kale harkens dib ugu soo degay aagga hore.
Cherokee Street waxay ahayd meel caan ah oo laga dukaameysto oo madadaalo laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad. Waqtigaas, Cherokee waxay martigalisay dukaamo badan oo tiyaatarro ah iyo tiyaataro lagu daray dukaamo gaar ah oo yar yar.
Safka Hore ee Cherokee, oo udhaxeysa Jefferson iyo Lemp Avenues, ayaa muddo dheer ahaa isku aadka gobolka. Daraasiin ganacsato qadiim ah, oo ay weheliyaan makhaayado, istuudiyaha farshaxanka, iyo dukaamo kale, ayaa safka ku jira qaybta bari ee Cherokee Street waxayna ka keenaan ugaarsato qadiim ah meel walba oo ay joogaan.
Galbeedka Jefferson, Cherokee Street ayaa dib loogu soo cusbooneysiiyay iyada oo loo marayo maalgashi bulshada Mexico-Mareykanka ah. Dukaamada meksiko, taquerias, dukaamada dharka, qolalka qurxinta, iyo dukaamada hadiyadaha ayaa ka soo baxay galbeedka Jefferson. In dhaweydba, Cherokee waxay soo jiidatay farshaxanno iyo bohemians doonaya nolol run ah oo qaali ah oo magaalo ah. Iyaga waxaa la socday qolalka farshaxanka, meelaha waxqabadka, pizzerias, baararka is biirsaday, iyo khamriga. Labada dhaqanba waxay ku barwaaqoobayaan dhinac-dhinac, Cherokee Street hadda waa meel caan ah oo laga cunteeyo iyo barta cawayska.
Jardiinooyinka ku yaal Dutchtown
Bartamaha xaafadda, isgoysyada Compton Avenue, waa Beerta Marquette. Marquette waxay ka kooban tahay barkadda guud ee bilaashka ah ee bannaanka ee dhinaca Koonfureed. Guriga Marquette Park Field House ee dhawaan la cusbooneysiiyay wuxuu dulmarayaa xaafadda wuxuuna siinayaa meel weyn oo lagu kulmo, lagu soo dhoweeyo, iyo inbadan. Xarunta Madadaalada ee Marquette waxaa ka mid ah goob jimicsi oo kubbadda koleyga ah waxayna waxqabadyo u qabataa dhalinyarada xaafadda. Garoomada isboortiga, garoomada tennis-ka, iyo garoon lagu ciyaaro oo ka kooban waxyaabaha raaxada leh ee Marquette Park.
The Isbahaysiga Marquette Park waa urur dhawaan la aasaasay oo ujeedadiisu tahay in dib loo howlgeliyo jardiinada isla markaana loo hagaajiyo tas-hiilaadkeeda. Lacag aruurin xagaaga 2019 waxaa laga ururiyey lacag ka badan $ 7,000 si aad u siisid alaab guri iyo raaxo kale barkadda. Dadaallada kale waxaa ka mid ah casriyeynta xarumaha kubbadda cagta.
Raadi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Marquette Park, oo ay ku jiraan dhacdooyinka soo socda, halkan DutchtownSTL.org.
Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada taagan geeska koonfur-bari ee Marquette Park ee Minnesota iyo Gasconade. Xaruntu waxay leedahay shaybaar kombuyuutar, istuduwaha farshaxanka, jikada bandhigga, maktabad, beer beel, iyo goobo badan oo lagu kulmo. Intaa waxaa dheer martigelinta shirar iyo dhacdooyin dadweyne iyo kuwo gaar ah iyo munaasabado, Thomas Dunn wuxuu kaloo bixiyaa saacado furan kombiyuutar iyo farshaxan farshaxan, xiisado HiSET (GED), waxbarashada waalidnimada, la talinta dhaqaalaha, xeryaha xagaaga ee dhalinyarada, iyo waxyaabo kaloo badan.
Waqooyiga Marquette awgeed Beerta Gravois, kaas oo xaafadda ku hareeraysan ay ka qaadato magaceeda. Park Gravois waxaa la aasaasay 1812, aakhirkiina xaafadda ayaa ku koray hareeraheeda. Beerta waxaa ku yaal dhismayaal qurux badan oo ku yaal bartankeeda, dhawaana waxaa la dhisay garoon cusub oo lagu ciyaaro.
Laclede Park iyo Minnie Wood Memorial Square
Dhanka bariga, ku dhowaad midba midka kale midba midka kale, waa Beerta Laclede iyo Fagaaraha Xusuusta Minnie Wood. Minnie Wood Square, oo ku taal South Broadway iyo Meramec, waxaa lagu kala soocaa taambuugga hurdiga ah ee dhalaalaya geeskaas. Beerta ayaa sidoo kale leh dhowr garoon isboorti oo ujeedooyin badan leh iyo garoon lagu ciyaaro. Laclede Park, oo ku taal Gasconade iyo Iowa, ayaa ka maqan waxyaabaha ay daris yihiin Minnie Wood, laakiin waxay leeyihiin kala duwanaansho lagu dhisi karo wadadii dib ugu noqoshada 1812. Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown aasaasay ay Saaxiibbada Baagaga Baarka mashruuca dib u cusbooneysiinta jardiinooyinka iyada oo loo marayo talooyinka bulshada
Jardiinooyinka ku yaal Dutchtown.
Xaafada Mount Pleasant ayaa magacooda laga soo qaatay Xadiiqadda Mount Pleasant Park ee Michigan iyo Dakota. Beertan nasashada waxay ka kooban tahay xeegada xeegada iyo garoon lagu ciyaaro.
Beerta Amberg wuxuu ku yaal qaybta galbeed ee Dutchtown, Gustine, Keokuk, iyo Dunnica Avenues. Dheemanka baseball, garoon cusub oo lagu ciyaaro, iyo gazebo la dayactiray ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu raaxeysto Amberg Park.
Tirada dadka ee Dutchtown
Afarta xaafadood ee ka kooban Dutchtown waxaa ku nool guud ahaan qiyaastii 30,000 oo qof. Aagga Dutchtown wuxuu ka mid yahay meelaha dadku ku badan yihiin ee St.
Dutchtown waa mid aad u kala duwan. Inkasta oo inta badan madow iyo caddaan, dadka Latino si dhakhso leh ayey u korayaan. Bulsho Fiyatnaamiis ah oo muddo dheer la aasaasay iyo soogalooti kale oo badan oo ka kala yimid daafaha adduunka ayaa qayb weyn ka ah dadka sidoo kale. Tirada dadka ku nool Dutchtown waa dad aad u da 'yar, oo qiyaastii saddex meelood meel ka mid ah dadka deggan ay da'doodu ka yar tahay 18 sano.
Baro wax badan oo ku saabsan tirada dadka ee Dutchtown, hadda iyo sannadihii la soo dhaafay.
Qaab dhismeedka xaafadda weyn ee Dutchtown wuxuu daboolayaa uun qaab kasta oo laga heli karo aagga St. Louis. Dhismayaal la dhisay Dagaalkii Sokeeye ka hor, Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib, iyo wax kasta oo u dhexeeya ayaa laga heli karaa xaafaddeenna. Qaab dhismeedka ugu da'da weyn guud ahaan waxaa laga helaa waqooyiga iyo bariga xaafadda dhexdeeda, laakiin marka laga reebo waxyaabo badan oo ka reeban.
Guryuhu inta badan waa leben waxayna ku kala duwan yihiin noocyada kala duwan ee guryaha yar yar ee qoryaha laga rido iyo bungalowyada yar-yar illaa afar-jibbaarane iyo guryo waaweyn oo ku yaal burburka Wabiga Mississippi. Marka lagu daro guryaha hal-qoys, laba-dabaqyo iyo dhismayaal afar-qoys ah ayaa aad u badan. Dhismayaasha waaweyn ee waaweyn ayaa sidoo kale si goos goos ah looga heli karaa xaafadda.
Guryaha Stork ee Virginia iyo Idaho.
Aagga Dutchtown waxay hoy u tahay degmooyin dhowr ah oo ku yaal Diiwaanka Qaranka ee Goobaha Taariikhiga ah. The Degmo Taariikhi ah Xaafada Gravois-Jefferson Streetcar wuxuu ka kooban yahay dhammaan Parkvois Park iyo dhamaadka woqooyi ee Dutchtown. The Degmada Cecilia ee Taariikhda, gaar ahaan waxa xusid mudan isticmaalka culus ee muraayadda cad ee “leben dubista” degmada oo dhan, iyo Dutchtown South HisDegmada Toric dabooli inta badan dhammaadka koonfureed ee Dutchtown. The Degmooyinka Taariikhiga ah ee Xaafadda Marine Villa daboolayaa qayb ka mid ah Marine Villa.
Dhowr dhisme oo shaqsiyadeed oo ku wareegsan Dutchtown ayaa ku liis gareysan Diiwaanka Qaranka sidoo kale. Fidinta Wershada Shirkadda Nacnaca Qaranka (dhowaan dib loo soo celiyey oo hadda hoy u yahay U-Haul) ayaa ku qoran, sida tan Guryaha Stork Virginia iyo Idaho. Dhowr iskuul oo loogu talagalay William B. Ittner ku qoran diiwaanka, oo ay ku jiraan dugsiga weyn ee Cleveland High School. Guryaha taariikhiga ah ee liis garaysan waxaa kamid ah Guriga Miltenberger on Osceola iyo Guriga Chatillon De Menil dhow dhamaadka Antique Row.
Meelaha kale ee dhismaha ee xaafadda waxaa ka mid ah kaniisadaha Katooliga St. Anthony ee Padua iyo St. Cecilia, Dhismaha khamriga ee loo yaqaan 'Lemp Brewery' oo ku yaal dhamaadka bariga Antique Row, iyo Dhismaha Cinderella ee ku yaal Cherokee Street.
Qeybaha Siyaasadeed ee Dutchtown
Aagga weyn ee Dutchtown wuxuu badanaa ku dhacaa saddex qaybood oo ka mid ah qaybaha St. Qaybaha galbeedka iyo koonfurta, ayaa 25aad Ward, waxaa matalaya Ald. Shane Cohn. The 20aad Ward wuxuu daboolayaa qaybta waqooyi ee xaafadda waxaana matalaya Ald. Cara Spencer. Qaab aan caadi aheyn 9aad Ward, waxaa u adeegay Ald. Dan Guenther, wuxuu daboolayaa dhulka qaar woqooyi, bari, iyo koonfur. Ald. Sarah Martin's Ward 11aad iyo Ald. Beth Murphy's 13aad Ward labaduba waxay daboolayaan wax yar oo ka mid ah dhamaadka koonfurta xaafada.
Seddex degmo oo ka tirsan Aqalka Wakiilada ee Missouri ayaa daboolaya Dutchtown. Degmadii 78aad, oo uu wakiil ka ahaa Wakiilka Rasheen Aldridge, wuxuu daboolayaa qaybta waqooyi-bari ee xaafadda. Degmadii 80aad, oo uu wakiil ka ahaa Wakiilka Peter Meredith, waxaa ku jira geeska woqooyi-galbeed ee Dutchtown. Qaybta koonfureed ee xaafaddu waxay ku dhacdaa degmada 81aad, oo hadda wakiil ka ah Wakiilka Steve Butz. Dhammaan xaafadaha waxay ku yaalliin degmada Guurtida Gobolka 5, oo ay u adeegto Sen. Steven Roberts.
Heerka federaalka, Dutchtown waxaa ka adeegta Wakiilka Mareykanka Cori Bush, US Sen. Roy Blunt, Iyo US Sen. Josh Hawley.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan saraakiisha la soo doortay, oo ay ku jiraan macluumaadka xiriirka, tusahayaga Saraakiisha la doortay ee Dutchtown iyo South Side.
Hawlgalka of DutchtownSTL.org waa in lagu wacdiyo xaafadda Dutchtown (oo si guud loo qeexay) lana wadaago waqtigeeda, waagii hore, iyo mustaqbalkeeda deganeyaashayada, deriskeena, martidayada, iyo qof kasta oo kale oo ku dhaca.
DutchtownSTL waxay la socon doontaa wixii soo kordha jadwalka dhacdooyinka, si togan u bixi wararka xaafada, wadaag sheekooyinka iyo sawirada, una bannee meelkasta oo raba inuu xoojiyo xaafadeena hada, ilaaliyo taariikhda xaafadeena, isla markaana hormariyo mustaqbal ifaya oo ku saabsan xaafada Dutchtown
Waan jeclaan laheyn hadii aad gacan ka geysato faafinta bartayada, iyo xaafadeena! Guji xiriiriyeyaasha wadaagga boggaga iyo boggaga si aad ugu ogeysiiso saaxiibbadaa waxa ka socda Dutchtown. Sidoo kale waad jeclaan kartaa, wadaag kartaa, oo aad nala socon kartaa Facebook, Twitter, Iyo Instagram.
Raadinta Soo Gudbinta
Ku darsiga iyo talo soo jeedinta ayaa ka badan soo dhaweynta. Fadlan booqo kaayaga page xiriir ama email info@dutchtownstl.org wixii fikrad ama su'aal ah.
Qaar ka mid ah waxa aan raadineyno: wararka xaafadda ee wanaagsan, ogeysiisyada munaasabadda, ilaha bulshada, liisaska loogu talagalay Tusaha Goobaha Dutchtown. Nala soo xiriir hadaad jeceshahay inaad wax ku darsato!
Ka caawi faafinta ereyga adoo raacaya, jeclaanaya, iyo wadaagida qoraaladayada Facebook, Twitter, Iyo Instagram. Runtii waan qadarinaynaa markay dadku nala wadaagaan shaqadeena.
DutchtownSTL waxaa lagu maalgeliyaa qeyb ahaan Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown iyo Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown. Ku deeq Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown si looga caawiyo taageerida goobta.
Read our Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo shuruudaha iyo xaaladaha bogga.
Qaar badan oo ka mid ah sawirrada boggan ku habboon ayaa leh Paul Sableman.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay October 19th, 2021 .
DutchtownSTL.org Ku saabsan Dutchtown